Noocyada daroogada Internet laga iibsado oo la doonayo in sharcidarro laga dhigo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Daroogada Internet laga iibsado. Sawirle: Drago Prvulovic / SCANPIX
Noocyada daroogada Internet laga iibsado oo la doonayo in sharcidarro laga dhigo
La daabacay måndag 20 januari 2014 kl 14.39
Maandooriyayaal ama daroogooyin hor leh ayaa Iswiidhen ku soo qulqulaya, hay’adaha dowladdu mar walba waa ay ka dib dhacsan yihiin ka hortagooda. Sidaas awgeed ayey hadda soo baxayaan dhawaaqyo badan oo doonaya in la hirgeliyo nooc cusub oo sharci oo ku dhisan in heerar loo sameeyo noocyada maandooriyayaasha, si loo dedejiyo in maandooriyayaasha cusub heerkooda dhaqso loo qiyaaso. Taasi waxay keeni kartaa in isbeddel yar oo maandooriyayaashaas lagu sameeyo uu sharcidarro noqodo. Hay’adaha ku shaqada lihi waxay hadda raacaan nidaamka in nooc walba oo cusubi uu sharcidarro yahay iyadoo mid mid loo qiimeynayo.
Balse caalin ku takhasusay maandooriyaha oo lagu magacaabo Lars Hansson kana hawlgala wakaaladda kastamka ayaan aamminsaneyn in heer u sameynta noocyada maandooriyayaashu ay xal noqon karto oo ay dhalin karto dood xagga sharciga:
- Waa wax dhib badan. Xataa haddii ay maandooriyayaashaasi isku nooc yihiin, waxaa dhici karta in ay awooddoodu kala duwan tahay. Markaas waxaa dhici karta in qof lagu xukumo nooc ay awooddeeda saameyntu la mid noqon karto sonkorta.